I-AWS 5.20 E71T-GS sisikhundla sonke, ucingo olukhuselweyo oluzenzekelayo olwenzelwe ifilitha enye yokupasa kunye nokudibanisa ilap kwensimbi okanye ikhabhoni yentsimbi njengobunzima obuyi-20 gauge, ngaphandle kokutsha. Irhasi engenacingo i-E71T-GS isetyenziswa rhoqo koomatshini abancinci abancinci be-volt ye-volt ye-110, enika isenzo se-arc esigudileyo ngesitshizi esincinci. Isantya sokuhamba siyakhawuleza, ukungena kulungile kwaye ukususwa kwe-slag kulula.
QAPHELA: Njengazo zonke iingcingo ezikhuselweyo, i-E71T-GS iqulethe iikhompawundi ze-fluoride, ezifuna ukujongwa ngakumbi komoya xa zisetyenziselwa ukuhambisa iintsimbi. I-zinc oxide eyenziwe ngexesha le-welding akufuneki ukuba iphefumlelwe njengoko inokubangela umkhuhlane wentsimbi. Xa ufaka i-welding ngaphakathi okanye kwindawo evaliweyo, qiniseka ukuba umoya ongenisa umoya wanele.
Ukuzikhusela ngokwakho, yonke into enentambo e-flux-cored wire for single pass application. Ukugqwesa ekusebenziseni kwizilinganisi ezincinci zentsimbi eqinisiweyo kunye nobulali. Isantya sokuhamba siphezulu kwaye imiphetho ye-weld igudile. Inentshukumo egudileyo ye-arc, ukugubungela i-slag ngokupheleleyo, ukususwa kwe-slag ngokulula kunye nokusasazeka okuphantsi. Akukho gesi lokukhusela elifunekayo. Ukusetyenziswa kwe-DC ethe nkqo kwi-welding welding yangoku kunciphisa umngcipheko wokutsha. Ukusebenza kokusebenza kuphezulu kunaleyo yee-electrode zetsimbi ezikhuselweyo.
Ukwenziwa kweMichiza yentsimbi efakiweyo (%)
Umba Mnu Hayi P S A1 Ni Mo Kr C V
Imigangatho .1.75 .0.60 -0.03 -0.03 .1.80 0.50 / / / /
Iipropati zoomatshini bentsimbi ebekiweyo
Umba Indawo yokuNika (MPA) Tensile Strength (MPA) Ukudibanisa (%) ICharpy V-notch Impembelelo yokuqina
Uvavanyo lweTemp.(° C) Impembelelo yamandla(J) Umyinge(J)
Imigangatho Iiyure ezingama-400 80480 Iifayile ezingama-20 / / /
5.Size kunye neNkcitho yangoku (DC-) kunye neVoltage Range
Ubungakanani Uluhlu lweVoltage Okwangoku (DC-) Isantya sokondla ucingo
1.2MM 16 ~ 20V I-120 ~ 200A 35 ~ 70
(intshi) 0.030 ” 0.035 ” 0 .040 ” 0.045 ”
1kg / 5kgs nge-spool nganye;
ngqo jiko, ubushushu shrinkable umboniso emva koko wapakisha kwiibhokisi.
Egqithileyo I-Electrode ye-Weld yentsimbi ye-Weld e-WS E6010
Okulandelayo: I-Electrode ye-Weld yentsimbi ye-Weld e-WS E6011
Stainless Welding elektroni AWS E309L-16 ...
Z408 Pure Nickel Cast Iron i electrode AWS ENiF ...